Hiran State - News: Wafti uu hogaaminayo afhayeenka baarlamaanka oo maanta ka dhoofay Mogdisho.
Wafti uu hogaaminayo afhayeenka baarlamaanka oo maanta ka dhoofay Mogdisho.
Mogdisho:-Afhayeenka Baarlamaanka Soomaaliya Shariif Xasan ayaa maanta ka dhoofay Magaalada Muqdisho, isagoo ku siijeeda dalka Kenya, oo uu kaga qeyb geli doono shir ay ku leeyihiin Golaha Amaanka Qaramada Midoobey iyadoo lagu casuumay Madaxda dowlada kumeel gaarka ah.
Afhayeenka ayaa lagu soo waramayaa iney shafarkiisa ku wehliyeen tiro ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Somaliya iyadoo sida warar hada inaga soo gaaraya dalkaasi Kenyana sheegayaan in siweyn loogu soo dhoweeyay Garoonka Diyaaradaha Joma Kenyata ee caasimada dalkaasi Kenya.
Safarka uu afhayeenka barlamaanka Somaliya ku aaday Kenya ayaa ku soo beegmaya kadib markii ay fashilmeen wada hadaladii ay in ka bada afar jeer isku arkeen isaga iyo Madaxweynaha, kaasoo la doonayay in lagu xaliyo khilaafka ka taagan xilliga kala guurka iyo qaabka ugu haboon ee ay wadanka uga dhici laheyd doorasho ay mudanayaasha baarlamaanka Somaliya ku soo doortaan hogaan aan kumeel gaar aheyn si wadanku u yeesho dowlad rasmi ah sida dowladaha aduunyada ka jira.
Afhayeenka oo maanta u waramayey BBC-da qeybteeda Somaliga ayuu ku sheegay inay wanaagsaneyd in shirka ay ka qeyb galaan isaga iyo Madaxweynaha iyagoo isku mowqif ka ah go'aanka Baarlamaanka ee ah in doorasho la qabto bisha 8aad,waxuuna yiri madaxweynaha isagaa laga doonayaa go,aanka uu qaatay sida uu difaacanayo laakinse doorashadu wey dhaceysaa.
Dalka Kenya waxaa lagu wadaa inuu ka furmo shir ay qaramada midoobay soo qaban qaabisay oo looga hadlayo arimaha Soamliya iyo sida ugu haboon ee ay doorasho u dhici karto. madaxweynaha iyo R/wasaare Farmaajo oo shirkaan kii ka horeyey diiday iney ka qeyb galaan hada wey ku qabsan yahiin iney halkaas tagaan si go,aan loga gaaro xaalada murugsan ee ka taagan dalka Somaliya.
· admin on May 23 2011 13:39:21 · 0 Comments · 1729 Reads ·
14,667,349 unique visits